Lapho uthenga Isizinda kusuka kuGoDaddy? Ingabe Ungumnikazi Wayo - Complete Guide
Lapho uthenga Isizinda kusuka kuGoDaddy? Ingabe Ungumnikazi Wayo
Akunandaba ukuthi uthenga igama lesizinda kwaGoDaddy noma kwabanye abahlinzeki besevisi, awukwazi ukuba ngumnikazi waphakade. Ezobuchwepheshe akekho noyedwa ongakufanelekela. Kufanele ukhokhelwe ukugcina isizinda sakho ngemuva kokuhlala okuthile.
Ungagcina igama lesizinda liphezulu ku- 10 iminyaka, ngemuva kwalokho kufanele uyivuselele. Ukwenza kucace kakhudlwana, ukuthenga isizinda kuyalingana nokuthatha nokukhokha intela yokwakha. Awukwazi ukuba ngumnikazi webhilidi kepha kufanele ukhokhe izindleko zenyanga zokulisebenzisa.
Enye into ukuthi iningi labasebenzisi lithenga igama lesizinda ubuncane be- 2 iminyaka kuze kube semkhawulweni we 5 iminyaka. Ngemva kwalokho, baya kolunye ukuvuselelwa. Ngihlale ngivuselela ngemuva 2 iminyaka. Uma usengozini yokulahlekelwa isizinda, wenza ukukhokhisa okuzenzakalelayo ku Izilungiselelo zeGoDaddy, lokhu kuzokukhokhisa ngokuzenzakalela lapho isizinda sakho sesizophelelwa yisikhathi.
Ukuthenga Isizinda Ngephakheji
Uma ungumsebenzisi omusha ukuthenga igama lesizinda, Ngincoma ukuthi kufanele ucabangele ukuthenga igama lesizinda lamahhala elifakiwe kwiphakheji yokubamba. Lokhu kukuvikela ekukhokheni okungeziwe. Akungatshazwa, uma uyothenga okokuqala ngqa, ungazizwa ukhokha imali eshisiwe. Ngakho-ke yingakho? Ngabelana ngolwazi lwami futhi ngiphakamisa ukuthi ngiqaphele maqondana nokukhetha.
Ngokwesibonelo–lapho uya ukuthenga nge-Bluehost inkampani enedumela elifanayo neGoDaddy. Ngeke bakunikeze kuphela igama lesizinda lamahhala kepha futhi nesitifiketi se-SSL esinezici eziningi ngentengo efanayo oyithola kuGoDaddy. Njengokwazi kwakho, Esinye sezici– Isitifiketi se-SSL kulezi zinsuku sesibalulekile. Kubhekwa njengesici sokuma. Bheka isithombe-skrini esilandelayo.
Ngaphezu kwalokhu, Kufanele uqiniseke ukuthi igama lesizinda kufanele libe ngu- .com lokuhlosiwe emhlabeni jikelele futhi kungaba yisizinda esithile sezwe njengokuthi uma ukhomba i-India kufanele uthathe i- .in, nge-Australia kufanele uthenge i-com.au, ngokufanayo ne-UK kuhle ukuthenga i-co.uk ngezinga lokuqala.
Nakhu okunye okuhle kuwe, uma useduze kosuku lokugubha njengoKhisimusi, Ulwesihlanu olumnyama. Lokhu kukusiza kakhulu. Intengo yesizinda yehlukile ngezikhathi ezahlukahlukene zonyaka. Ngokwesibonelo– ngosuku lwangoLwesihlanu Olumnyama, ungasizakala kalula kuze kufike ku- 70% kuvaliwe. Ngenkathi izinsuku ezijwayelekile, bakukhokhisa ngamanani entengo eguquguqukayo.
Ngaphandle kwalokhu, abasebenzisi abaningi noma ama-newbies athola inani lentengo leGoDaddy liphezulu ngokuqhathaniswa. Ngenkathi ezinye izinkampani zokubamba zinikela ngezici eziningana ngentengo efanayo. Abanye bakhetha ukuthenga isizinda kusuka kuGoDaddy kanye nensizakalo yokubamba kusuka kwenye.
Isiphetho Thenga Isizinda kusuka kuGoDaddy bese uyi-Own: Hhayi kuphela izizinda ezivela ku-Godaddy kepha futhi nabanye abahlinzeki bezinsizakalo ezifanayo abake bakunikeze ubunikazi baphakade kusizinda esithile. Kepha ungabhalisa inqobo nje uma ufika kumkhawulo ongu- 10 iminyaka. Ngemva kwalokho, kufanele uyivuselele. Ama-Blogger noma abanikazi bewebhusayithi bavame ukuvimbela kusuka kusizinda sokubhalisa isikhathi eside. Lokhu kubiza kakhulu. Ngesikhathi esisodwa, zivuselelwa ubuningi be 5 iminyaka.
Previous PostNgabe kufanele ngithenge i-SSL ku-Host yami?
Next PostUngayakha Kanjani Iwebhusayithi ngemuva kokuthenga igama lesizinda?